Kunis kan nu hubachiisu kennaan warra dhukkubsatan fayyisuu warraa dhukkubsataniif malee nama dhuunfaatu akka qabeenyaa tti ittiin boona miti. Yookiin galii ittiin argata miti.Hafuuri qulqulluun warri dhukkubsatan akka amantii qabaatan isaan garaagara. Namni kennaa kana qabus amantii, obsaa fi jaalala namootaaf qabaachuu akka danda’u godha. 5.
Dec 27, 2020 · Aplicación kana irratti Ergaa Jaalalaa miidhagoo fi nama hawatan Afaan Oromootiin argachuu ni dandeessu. waliigalatti App'n kun Ergaa Jaalalaa 200 olii kan de keessatti hammateedha. yeroo yerotti kan isiniif daballu ta'a. Nama jaalattaniif Ergaa Jaalaalaa Erguudhaan jaalala keessan ibsadhaa.
Jan 30, 2015 · Kanaafuu sabni bal’aan kun ergaa guutummaa kitaabicha keessatti argamuu dubbisee xiinxaluun yaada ijaarsaa, qeeqaafi kallattii qorannoo birootiif ka’umsa akka ta’uuf kan itti yaadamedha. Ani akka barreessaa kitaaba kanaatti nama dhuunfaa yookaan dhaaba kamuu jeequuf yookaan balleessuuf utuu hintaane, qaamni kamuu dogoggora jiru mara ...
Dargaggoonni leenjicha irratti hirmaatan akeekaafi kaayyoo Paartii Badhaadhinaa hubachuun ololaafi maqa balleessii humnoonni badii jijjiirama kana gufachiisuuf afarsan sirritti addaan baafachuun Badhaadhina waliin kan hiriiraan ta'uu, kanaafis kutannoofi ejjannoo guutuu akka qaban firaafis ta'ee diinaaf ergaa dabarsani.
Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu... Guutu dubbisi →
Waaqeffannaan of keessatti, gammachuu, jaalala, sagada, oofuu, kadhannaa, of kennuu, abboomamuu, walii ofii mararsiifachuu, waliif jiraachuu fi k.k. f of keessatti ni hammata. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu.
YouTube channel kiyyas Sebscerb naaf gadha
Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMSAfaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian
“Seera ergaa barreeffamaa ilaalchisee baaste dagachuun salphaa dha. Nama tokkoo wajjin utuun haasaʼuu ykn utuun nyaata nyaachaa jiruu ergaa barreeffamaas nan barreessa.”—Aalisan. “Konkolaataa oofaa ergaa barreeffamaa barreessuun balaa qaba. Ija kee karaa irraa fuunaan balaan si mudachuu dandaʼa.”—Aanee.
(James; Yaaqoob) Ergaa Yaaqoobi 5:16 "Yaa jaallani, waan jaalalli kan Waaqaa ta'eef koottaa waljaalannaa; namni jaalatu marti Waaqa irraa dhalate; Waaqas ni beeka. Sababii Waaqni jaalala ta'eef namni hin jaalanne cufti Waaqa hin beeku." (I John) 1 Yohaannis 4:7-8
Nov 12, 2006 · Haata’uu garuu Jaagamaatiin kun haamilee isa hin tuqne. Bakka jiru hundumaatti waa’ee gabrummaa Oromoo dubbatee hiriyoota isaa qabsoof kakasuu irraa duubaa hin deebine. Yeroo kana mana suuraa Tsiyoon jedhamu Amboo keessa waggota sadan kana yeroo hojjetaa tures sabbonota Oromoo mamiltooti isaa dinqisifanna fi jaalala guddaa horateera.
Jan 11, 2020 · #Xalayaa #DabaliiJaalalaa #Jaalaladhugaa ergaa jaalala dhugaa irraa barattu like subscribe godhaa #Ethiopia #Love #Oromo.
Jaalala Abbaa fi Haadha | Jireenya Badhaatu Bakka jaallalli hin jiretti maatiin ijaarramu hin Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa fudhachu fi isaan didu
Gara EveryBarataa.com baga nagaan dhuftan. Kun bakkatti waa'ee Kolleejii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee Waaqayyoo caalmaaatti bartani dha.
Jun 15, 2016 · Akkuma beekkamu duraan fuulli zelalem tesfaye facebook qofa irratti barruullee rakkoo jireenya keessatti nama mudatan ittiin furatan isiniuf dhiheessaa turuun ni yaadatama.
Aug 14, 2009 · ASOOSAMICHI ERGAA FI ICCITII BAAYYE QABA DAANDII JAALALA ADDUNYA KANAAS NAMA BARSA. ati barreessan asoosamicha galatomi. Reply. Gaaddisaa Gabbisaa / Nov 17 2012 1:41 am.
"Nutti ergaa nuti ni kunuunsina," jechaa jiru. ... Somaaloonni ammoo gaalaaf jaalala olaanaa qabu. Qabeenyaa isaanii kan madaalanis maallaqa callaa harkaa qabaniin osoo hin taane, baayyina gaalaa ...
May 09, 2020 · Download Amharic Audio Bible Free apk 4.0 for Android. Amharic Audio Bible Free app is easy to read bible & download audio to stream .
ACCOUNTANCY EURASIA/ERGAA (Eurasian Region Group of Accountants & Auditors) provides a unique regional platform, created by an inclusive community of committed professional accountancy organisations in Eurasian Region.
Milkaawina guddaan jaalala bakkaan gahachuu malee waanti nama yaachisaa tokkollee kan hin turree fi siila duraafis cidha gaahelaa bakkaan gahuuf abdii guddaan eeggachaa jirra. yaada kanatti dabalee maxxansuu kanan barbaadu Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Page 7 jaalallee koo wajjin kan wal ...
Akka ergaa Phaawuloos keessatti caqasameen, “Akka ayyaana Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa’eera” 1Qor.3:10. Kunis manni hundeen isaa gadi hin fagaanne, weerartoota guyyaa fi hattuu halkanii jalaa hin ba’u waan ta’eef.
- Ergaa tokko gabaabatti dabarsuuf mala gargaarudha. - Keessattu daa’immaniif dhiyaachuu akka qabu ni gorfama 2. Giddu –galeessa:- agarsiisa lamaa hanga sadii kan qabatedha. - Diraamaa kanaan agarsiistotni seenawaan ni dhiyaatu. - Dargaggootaa fi beektotaaf kan dhiyaatudha. 3.
Dambalii Jaalalaa. 2.8K likes. Dambaliin Jaalalaa barnoota, gorsa, muuxannoo, mudannoo fi xalayoota jaalalaa karaa ogeessotaa fi hordoftoota qophichaatiin dhiyaatu isiniif dabarsa.
Warreen ergaa jaalala keesaan dabarfachuu barbaaddan karri keenya banaadha @Sool_dave @SOOL_DAVE J @JAALALA_DHUGA O @JAALALA_DHUGA I @JAALALA_DHUGA N @JAALALA_DHUGA Yaadaaf @Sool_dave 32.7K views $øõl Ďavě , 21:38
JAALALA BILISUMMAA. Aside Posted on September 15, 2013 Updated on October 3, 2013. ba’aa gabrummaadhaan ... Ergaa biraas qaba dargaggootaafillee Kan ofii gatanii laga
Furtuun isaa jaalala Waaqayyo barbaaduudha, kan kee miti. “Waaqayyotti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa kee siif ni kenna”(Psalm 37:4). Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta’e inni hafuuratti siif kan bu’aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu “hayyama ...
Nama kanaaf guyyaatti yeroo baayʼee ergaa barreeffamaa barreessita; akkasumas ni bilbiltaaf. Walitti dhufeenya jaalalaa jalqabdeetta jechuu dhaa? Yommuu hiriyoota keessanii wajjin yeroo dabarsitan hundatti, nama saala faallaa qabu tokkoo wajjin kophaatti adda baatanii taphattu. Walitti dhufeenya jaalala jalqabdeetta jechuu dhaa?
Apostle (Abugida): Ergaa qulqulluu Yahannis dubbisuun qomatti kan itti qabataniifi barreessuu kan itti eegalanidha. Hojii ergamootaa (Acts of the Apostle): sadarkaa kanatti barattoonni sagalee olkaasuun hojiiwwan ergamootaa akka dubbisan irraa eegama. Kana keessatti gaheen barsiisaa yaadawwan ifa hintaane ibsuudha.
Jaalala ajaayibsiisaa jireenya kootiif qabduuf immoo galatoomi. Ammas yaa Yesuus cubbuu ani godhee ittiin si gaddisiise hundumaa anaaf dhiisi. Yeroo ammaatii jalqabee immoo hirkoo jireenya koo fi amanannaa koo siin godhadheera.
<>Kutaa kana irra dhaabadhuutii Waaqayyo jaalala Inni siif qabuuf Isa galteeffadhu! Utuu Inni siin hin jaalatu ta’ee, yeroo ati cubbuu hojjette, yeroo diinonnii kee si irratti ka’an, yeroo namoonni hamaa si irratti yaadan, Yeroo atumti immoo of irrattti hamaa yaadde, badiisa guddaa badda turte.
Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture.
Dhuma irratti FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas ...
Jaalala miidhagina qaamaa irratti hin hundoofne," jechuun ibsa ogeessi suuraa Hindii badhaasa mo'ate Niraaj Geeraa. ... Deepak akka jedhutti maqaan Artii jedhu ergaa yaadachiisaa bilbilaa ...
Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS Ergaa Jaalala - Afaan Oromoo Love SMS Afaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian...
- Share Ergaa Jaalala( Love SMS) SMS with your loved one once via Telegram,WhatsApp, Imo and etc. - Get Daily Special Oromo Love SMS - Today Afaan oromoo Love SMS - Get Random Oromo Love SMS on single click A Beautiful collection of Oromo love SMS messages.
Feb 28, 2013 · Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmaa Oromoo biraa jaalala fi kabaja guddaa qabu ta’uun beekkamaa dha. Kabaja fi jaalala kan horate hojii saba Oromoo boonsu hedduu waan hojjeteef; injifannoo hedduu waan galmeesseef. Qubeen afaan Oromoo amma biyya keessaa ittiin hojjetamaa jiru injifannoolee gurguddoo kana keessaa isa tokko.
Jan 22, 2016 Jaalala Oromoo Love Messages. Walaloo garagaraa kan Abdulbasix(Saphaloo) Aadaa Oromoo Afaan oromoo Asoosama.. 1 Feb 2017 . Jaallataa Addisuu Guddataa, Nekemt, Welega, Ethiopia. 5,817 likes · 15 talking about this. namni garuu jaalatamuu isaatis jaallachuu isaatis gammadu qaba.
Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS Ergaa Jaalala - Afaan Oromoo Love SMS Afaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian Language). Afaan Oromoo Love SMS provides best SMS on love. Express your feeling in your own language to your Loved one. The most user friendly Afaan Oromoo Love Message app on Android with the best Love ..."Nutti ergaa nuti ni kunuunsina," jechaa jiru. ... Somaaloonni ammoo gaalaaf jaalala olaanaa qabu. Qabeenyaa isaanii kan madaalanis maallaqa callaa harkaa qabaniin osoo hin taane, baayyina gaalaa ...
Jan 11, 2020 · #Xalayaa #DabaliiJaalalaa #Jaalaladhugaa ergaa jaalala dhugaa irraa barattu like subscribe godhaa #Ethiopia #Love #Oromo. Dec 27, 2020 · Aplicación kana irratti Ergaa Jaalalaa miidhagoo fi nama hawatan Afaan Oromootiin argachuu ni dandeessu. waliigalatti App'n kun Ergaa Jaalalaa 200 olii kan de keessatti hammateedha. yeroo yerotti kan isiniif daballu ta'a. Nama jaalattaniif Ergaa Jaalaalaa Erguudhaan jaalala keessan ibsadhaa. Safuun saalfii dhabee saalli kafana dhabee Qullaan bareedaa ta’ée fafni ulffinna ta’ée Weellun dhama dhabee walaloon ergaa dhabee Sirbi gaana ta’eé gaanni jaalala ta’ée Weddun hobobii ta’eé hobobsaan Nama ta’ée Namni sarummaa fedhee sarummaan fedhii ta’ée Abbaan … Safuun saalfii dhabee saalli kafana dhabee Qullaan bareedaa ta’ée fafni ulffinna ta’ée Weellun dhama dhabee walaloon ergaa dhabee Sirbi gaana ta’eé gaanni jaalala ta’ée Weddun hobobii ta’eé hobobsaan Nama ta’ée Namni sarummaa fedhee sarummaan fedhii ta’ée Abbaan …
My dad died and ipercent27m depressed!иPErgaa xiqqan gama jaalala keessatti mul’atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan”E”jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe.
Dhaloonni ergaa isaani sirriitti dhaamuu qaba.” Aartiin maal jetta jennaan: “Anaaf aartiin jaalala,anaaf aartiin dinagdee,aartiin anaaf siyaasa,aartiin anaaf waan hunda.Haala kami keessaatuu yoo ilaaltu misaayila jabaa caala,aartiin baayyee humna qaba,sabnii aartii hin qamne sabaa hin tahuu,” jedha. Waaqeffannaan of keessatti, gammachuu, jaalala, sagada, oofuu, kadhannaa, of kennuu, abboomamuu, walii ofii mararsiifachuu, waliif jiraachuu fi k.k. f of keessatti ni hammata. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu.